2003 ခုနှစ်ကကျောက်ဆည်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အပါအ၀င် ၉ ဦးကို အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့သတ်သူကို ဗုဒ္ဓအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမား များသည်ထောင်ထဲ၌ တယောက်မကျန် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် အကုန်လွတ်ပေးပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၇ ဦးစလုံးသေဒဏ်ချပြီး ယနေ့အချိန် ထိလွတ်မြောက်လားခြင်းမရှိသေးပါ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ထိုင်းနိုင်ငံတရားရေးကိစ္စမှာ စိတ်ပူပြီး အမျိုးစုံ ၀င်ရောက် စွက်ဖက် ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေ- မြန်မာပြည်ထဲမှာ လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားဘဲ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ လှူဒါန်းနေတဲ့ လူငယ်တယောက်ကို မတရားသဖြင့် အမှုတွေဆင် မဆိုင်တဲ့အမှုတွေမှာပါ တရားခံလုပ် နေတာကို ဘယ်လိုပြောကြမှာလဲ
ဘယ်လိုအခြေအနေကိုဘဲ ရောက်ရောက် နောက်ဆုံးတော့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို မဖြစ်မနေ လုပ်ကိုလုပ်ကြရမှာ ပါ »
2003 ခုနှစ်ကကျောက်ဆည်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အပါအ၀င် ၉ ဦးကို အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့သတ်သူကို ဗုဒ္ဓအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမား များသည်ထောင်ထဲ၌ တယောက်မကျန် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် အကုန်လွတ်ပေးပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၇ ဦးစလုံးသေဒဏ်ချပြီး ယနေ့အချိန် ထိလွတ်မြောက်လားခြင်းမရှိသေးပါ
Pan Pan Pwint
အရေးအခင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီဘာသာရေး အရေးအခင်းဖြစ်ပြီး
ဖက်မှုတွင် ၉၆၉ ခေါင်းဆောင် ရေစည်ဆရာတော်နှင့် မင်ကွန်းကျောင်းဆရာတော်တို့ ဦးဆောင်ပြီး မွတ်စလင်မ်တွေအိမ်နှင့်
ဗလီများ ဘာသာကျောင်းများ မီးရီို့
၌အိမ်ပေါ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးအပါအ၀င် မိသားစု ၉ ဦး
့ယင်းအရေးအခင်းအပြီး ရေစည်ဆရာတော်ဝီရသူ နှင့် မင်းကွန်း
ဘုန်းကြီးကျောင်းဆရာတော် အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓအကြမ်းဖက်သမား
ချမ်းသာခွင့်ဖြင့်၂၀၁၂တွင် တစ်ယောက်မှမကျန် အားလုံးပြန်
ဘာသာရေးအရေးခင်းအပြီး ၃ ရက်အကြာတွင် အစွန်းရောက်ဘုန်း
ပါတ်ဝန်းကျင်မှရွာများကိုလှည့်လည်ပြီး မွတ်စလင်မ်ရွာကြီးဖြစ်သော လက်ပန်ရွာကို ရွာအခြေမှမီးရီို့ဖျက်
ကိုလက်ပန်ရွာအရှေ့ဘက်ကပ်လျှက်ရှိသောသပြေပင်ရွာမှကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က လက်ပန်ရွာ ရပ်ကွက်
သတိပေးသဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌ ကရွာပါတ်ပါတ်လည်ကို ကင်းများ
၃ရက်မြောက်နေ့၌ အစွန်းရောက် ဘုန်းကြီးတပါးနှင့်
အနောက်ဖက်ရှိ ရွာနန်းရွာ ငါးအိုးရွာ
သင်တောင်းငယ်ရွာရွာများကို ည ၁၁
ယောက်ရှိရာ ၂ ယောက်ကဥက္ကဋ္ဌ
၄ဦးက သတ်ပစ်လိုက်ပါသည် ယင်းဘုန်ကြီးက ဓားပြီးတုတ်ပြီး
ခုတ်ဟုလည်းပြောနေပါသည် ကင်းသမားတစ်ဦးက ဒီလိုခုတ်လိုမရဘူးဟုပြောကာ တက်္ကဗီရ် ဖတ်ပြီးခုတ်မှသတ်ရသွားပါ
သည့်လူကိုသတ်မှုဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌ အပါအ၀င် ဆယ်အိမ်မှုး ရာအိမ်မှူး
အပါအ၀င် ၁၇ ဦးသေဒဏ်ချထားပါ
များသည်ထောင်ထဲ၌ တယောက်မကျန် အကုန်လွတ်မြောက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၂တွင်
ဘာသာ ၁၇ ဦးမှာတော့လွတ်ငြိမ်းချမ်း
ခွင့်ပေးတိုင်း ၄င်း ၁၇ ဦးမှာမျှော်လင့်
ယခု ၂၀၁၄ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အပါအ၀င် ၉ ဦးကို
၁၇ ဦးစလုံးသေဒဏ်ချပြီး ယနေ့အချိန်
This entry was posted on October 9, 2014 at 11:49 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.